Daawo: Xogtii ugu dambeysay diyaaraddii kusoo dhacday garoonka muqdisho iyo AMISOM oo….. | Kismaayo24 News Agency
Daawo: Xogtii ugu dambeysay diyaaraddii kusoo dhacday garoonka muqdisho iyo AMISOM oo…..
Tuesday May 30, 2017 - 11:39 under Somali News by Tifaftiraha K24
Garoonka diyaaraddaha aadan cadde ee magaalada muqdisho waxaa saakay kusoo dhacday diyaarad xamuul ah oo u kireysneyd howlgalka amisom.
Diyaaraddaan waxaa iska leh shirkadda Bancroft ee qaabilsan la talinta howlaha amniga iyo tababarka ciidamada AMISOM.
Ilaa 5 ruux oo ajaanib ah ayaa diyaaradda la socday waxaana la sheegay in dhamantoodaba ay bad qabaan kadib markii ay diyaaradda iska tuureen ka hor inta aysan dhulka soo dhicin.
Duuliyiha diyaaradda dhacday ayaa sheegay in diyaaradda ay lugaha u bixi waayeen kadibna lagu wargaliyay in diyaaradda uu kusoo dajiyo sida ugu macquulsan wuxuuna sameeyay in diyaaradda uu dhulka soo dhigay iyadoo aysan waxba gaarin shaqaalihii la socday .
Saraakiil ka tirsan Garoonka diyaaradaha Aadan cadde ayaa sheegaya in diyaarada ay markii hore soo gudbisay farriin deg deg ah, kaddib markii ay lugaha u bixi waayeen, isla markaana shidaalka uu gabaabsi ka ahaa.
Gaadiidka dab damiska ayaa goobta soo gaaray iyagoona ku guuleystay in ay damiyaan dab yar oo diyaarada ka kacay.
Howlihii garoonka aadan cadde ayaa hakad galay mana jirin maanta duulimaad magaalada ka baxay iyo mid soo dagay toona.
Shirkadda Bancroft oo ah shirkad laga leeyahay Mareykanka ayaa Ciidamada AMISOM ka taageerta dhinacyada tababarka, la talinta amniga, iyadoo shirkaddan ay leedahay eeyaha u tababaran urinta waxyaabaha qarxa ee ka qeyb qaata howlaha sugida amniga garoonka diyaaradaha Muqdisho iyo Xerada Xalane.